तपाइँलाई एसईओ विशेषज्ञको आवाश्यक छैन! | Martech Zone
तपाइँलाई एसईओ विशेषज्ञको आवाश्यक छैन!
मङ्गलबार, जनवरी 20, 2009 शुक्रवार, अक्टुबर 17, 2014 Douglas Karr
त्यहाँ ... मैले भने! मैले यो भने किनकि मैले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेशनमा खर्च भएका सबै रकमहरू सानो देखि मध्यम आकारका व्यवसायहरूमा देखेको छु र मलाई लाग्छ कि यो एक र्याकेट हो। यहाँ खोज ईन्जिन अनुकूलन उद्योगको मेरो दृष्टिकोण छ:
बहुमत खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन भित्र पर्छ उत्कृष्ट सामग्री लेख्न, आधिकारिक आकर्षित backlinks लाई कि सामग्री र केहि महत्वपूर्ण उत्तम अभ्यासहरू अनुसरण गर्दै। यी सबै आधारभूतहरू छन् जुन कसैले पछ्याउन सक्छ - तर धेरैले गर्दैन।
म अझै छविहरू भारी र पाठ प्रकाश छन् कि बजार मा हिर्काउने केहि नयाँ साइटहरु देख्न, कि हेडिंग, उपशीर्षक, आदि जस्तै साधारण तत्व को उपयोग छैन ... र एक खोज इन्जिन क्रल गर्न सक्छन् कि एक साधारण साइटम्याप राख्दैन। यी सुझावहरू जुन मैले मेरो ब्ल्गमा बारम्बार लेखेको छु र अन्य ब्लगहरूमा गरेको देखाउँछु तपाईंको साइटलाई% will% प्राप्त हुनेछ।
तथ्य यो हो: यदि तपाइँ बारम्बार प्रासंगिक सामग्री लेख्नुहुन्छ जसले खोजशब्दहरूले खोजिरहेका खोजशब्दहरू र वाक्यांशहरू समावेश गर्दछ, तपाइँको साइट फेला पर्नेछ। त्यो सामग्रीको प्रभाव हुनेछ बौने कुनै पनि ट्वीक गर्ने जुन कुनै एसईओ विशेषज्ञले प्राप्त गर्न सक्छ। तपाईंको पैसा बर्बाद रोक्नुहोस् र सामग्री लेख्न सुरू गर्नुहोस्!
यति धेरै व्यक्तिहरू युआरएल लम्बाई, आउटबाउन्ड लिंकहरू, नोफोलो, आदि, इत्यादि जस्ता चीजहरूमा खोज ईन्जिनको रहस्य बहस गर्न चाहन्छन् ... तर तिनीहरू केवल १% मा खेलिरहेका छन्। निश्चित, केहि व्यवसायको लागि, त्यो सानो १% लाखौं डलरमा भिन्नता हुन सक्दछ ... तर तपाईं र मेरो लागि यो बाunk्ग छ।
उद्योगको अन्य गोप्यता competition 99.99% हो तपाइँको प्रतिस्पर्धाको उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्ने कुराको संकेत छैन। प्रासंगिक, बाध्यकारी सामग्री लेख्नुहोस् र तपाईं खोजीमा लडाई जित्न सक्नुहुन्छ।
टैग: सामग्री मार्केटिङdiyआफै गरSeo कसरी गर्नेकसरी खोजीको लागि अनुकूलित गर्नेखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओएसईओ परामर्शदाताएसईओ विशेषज्ञ
जनवरी 20, 2009 मा 2: 10 एएम
उत्तम तपाईंको व्याख्या एकदम स्पष्ट छ कि विज्ञलाई पनि असहमत जस्तो देखिदैन। आशा छ कि तपाईले यस्तै महत्वका अन्य कुराहरुको व्याख्या गर्नु हुन्छ।
जनवरी 20, 2009 मा 8: 37 एएम
म तपाईंको भावनासँग सहमत छु कि मासु र आलु (सामग्री) ग्रेभी (एसईओ अप्टिमाइजेसन) भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छन्, तर आश्चर्यचकित छु यदि तपाईं समग्र एसईओको बारेमा चिन्ता गर्न सिफारिश गर्दै हुनुहुन्छ भने ...
मैले इन्टरनेटको वरिपरि पढेको छु कि त्यहाँ त्यस्ता कामहरू छन् जुन ब्लगरले उनीहरूको पोष्टहरूको अनुकूलन गर्नै पर्दछ, जस्तै मागको आधारमा कुञ्जी शव्द रोज्ने र त्यस कुञ्जीलाई पोस्टमा कम्तिमा X पटक छिचोल्नु तर XX समय आदि छैन।
के तपाईंलाई लाग्छ कि अझै गर्न आवश्यक छ, वा हामीले यसलाई छोड्नुपर्छ र मात्र अन्तिम सिमेन्टिक वेबको लागि लेखनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ?
जनवरी 20, 2009 मा 8: 46 एएम
SEO का सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू अनुसरण गर्न आवश्यक छ। राम्रोसँग डिजाईन गरिएको पृष्ठ भएको साइट खोज्ने ईन्जिनहरू देखाउनका लागि साइटम्याप जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ र त्यहाँ के महत्त्वपूर्ण छ, आदि छ।
धेरै व्यक्तिहरू, विशेष गरी एसईओ "विशेषज्ञहरू" उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि एक उत्तम प्लेटफर्म खोज्नको लागि सल्लाह दिनुभन्दा बरु एसईओको बारीकमा बहस गर्दै ... र यसमा लेख्नुहोस्। राम्रो सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीले आवश्यक उत्तम अभ्यासहरू समावेश गर्दछ, वा धेरै प्लगइनहरू / एड्-अनहरू छन् जुन मद्दत गर्दछ।
यति धेरै सानादेखि मध्यम आकारका व्यवसायहरूले १% मा काम गर्न को लागी समय र पैसा खर्च गरिरहेका छन् जहाँ उनीहरू वास्तवमै भिन्नता गर्न सक्थे!
जनवरी 20, 2009 मा 9: 31 एएम
क्रिस, त्यहाँ कुनै विशेष X- समय सूत्र छैन। यो त्यो भन्दा धेरै नै जटिल छ र अनुभवी एसईओहरूले कुञ्जी शब्द आवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दछ तर तपाईंले आफ्नो पोस्टहरूमा मुख्य वाक्यांश र भेरियन्टहरू प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुपर्दछ।
लोकप्रिय र अत्यधिक लक्षित कुञ्जी शव्दहरू छनौट गर्नु पनि आवश्यक छ तर मलाई लाग्छ कि यो डगको पोष्टमा ग्राफिकको "सामग्री" भागमा पर्दछ, SEO विशेषज्ञको भाग होईन। यदि SEO तपाईंको ब्लगिंग रणनीतिको हिस्सा हो भने खोजशब्द चयन एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
जनवरी १, २०१ 20 १२::2009 अपराह्न
जेम्स सही छ - प्रासंगिक सामग्री लेखेर मेरो मतलब यही हो। तपाईं केवल यो पूरा गर्न एक विशेषज्ञको आवश्यक छैन।
जनवरी 20, 2009 मा 9: 28 एएम
एक SEO "विशेषज्ञ" को रूपमा मैले यहाँ एक टिप्पणी गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं अहिले गुगलमा "विजेट" खोज्नुहुन्छ भने, १२ 128,000,000,००,००० परिणामहरू छन्।
केवल १० पहिलो पृष्ठमा देखाईएको छ र केवल १ शीर्ष स्थानमा छ। त्यो १० परिणामहरूको १% भन्दा धेरै कम छ।
जबकि यो चरम उदाहरण हो, र म डगको पोष्टको आधारसँग सहमत छु, यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि प्रतिस्पर्धी उद्योगहरूमा १% डगले प्राय: माथि स्थान वा तेस्रो पृष्ठ स्थान बीचको भिन्नता हुन सक्छ। र डगको श्रेयमा उनी यो भन्छन कि यो कहिलेकाँही मामलामा हुन सक्छ, म केवल मेरो एसईओ भाइहरूको लागि खडा छु <- डग थेसिसको लागि, मजाक भित्र
सामग्री र ब्याकलिंक्स एसईओ को नींव हो। तपाईंले उनीहरूको प्रभावकारिता पूर्ण रूपमा अधिकतम नगरेसम्म उनीहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
जनवरी 20, 2009 मा 10: 01 एएम
यो लेख्न को लागी धन्यवाद - विशेषज्ञ कुर्सीबाट बोल्दा “तपाईंलाई विशेषज्ञको आवश्यक पर्दैन” भन्नको लागि पर्याप्त पारदर्शी भएको उद्योग देख्न पाउँदा ठूलो छ। हो, यो कडा परिश्रम गर्दछ, तर त्यो केवल यसले लिन्छ।
जनवरी 20, 2009 मा 10: 15 एएम
म तपाईंको मुख्य दावी संग असहमत छु। म एसईओ मा काम गर्दछु र यो मलाई मनपर्ने काम हो। एसईओ वेब विकासको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जुन बेवास्ता गर्न सकिँदैन। समस्या यो छ कि, प्राय: जसो चल्ती डिजाइन र कम कार्यान्वयनको पक्षमा उपेक्षा गरिन्छ।
यसलाई यस तरीकाले हेर्नुहोस्। कम्पनीहरू एसईओको बारेमा सोच्न चाहँदैनन्। तिनीहरूले बरु कसैलाई यसको बारेमा सोच्न भुक्तान गर्नेछन् र निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूले यो ठीक गर्दै छन्। जस्तै उनीहरूले अरू कसैलाई डिजाइनको बारेमा सोच्न भुक्तान गरे। मुख्य समस्या यो हो कि प्रायः डिजाइनरहरू SEO बारे सोच्दैनन्।
किन कोहीले कम्पेन्डियमको ब्लग प्लेटफर्मको लागि पैसा तिर्ने छन्, जब त्यहाँ थुप्रै निःशुल्क विकल्पहरू छन् जुन ठीक काम गर्दछ? यो एक स्व-होस्ट गरिएको सर्वरमा WordPress फेंक गर्न र ब्लगिंग सुरू गर्न धेरै लिदैन। तर व्यक्तिले तपाईलाई तपाईको विशेषज्ञताको लागि भुक्तान गर्छन्, र कम्पनीले तिनिहरूले तिर्दछ जब तिनीहरूले एसईओ परामर्श खरीद गर्छन्।
म तर्क गर्दिन कि त्यहाँ धेरै एसईओ छन् जुन वास्तवमा त्यहाँ बाहिर केहि पनि थाहा छैन, तर तपाईं कुनै पनि क्षेत्रमा यसमा दगुर्दै हुनुहुन्छ। कुराको तथ्य यो हो, मलाई SEO थाहा छ र ग्राहकहरूको लागि म सक्दो राम्रो काम गर्छु।
त्यसोभए कम्पनीहरूलाई एसईओ विशेषज्ञहरू चाहिन्छ, यदि तिनीहरू आफै एसईओको बारेमा सिक्न चिन्ता लिन सक्दैनन्।
जोनाथन - मलाई लाग्छ तपाईं मेरो केस यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ! किन कोहीले उनीहरूको ब्लगलाई कम्पेन्डियम जस्ता प्लेटफर्ममा राख्न चाहन्छन् भन्ने कारण उनीहरूलाई SEOको चिन्ता पर्दैन!
मलाई विश्वास छ त्यहाँ केहि कम्पनीहरू छन् जुन शीर्ष for का लागि युद्धमा छन् र म भन्छु कि त्यहाँ १% (वा कम) छ जुन उनीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि SEO विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
मेरो पोष्ट औसत कम्पनीको बारेमा हो ... प्राय जसो SEO लाई राम्रो अभ्यासहरू प्रयोग गर्ने, सान्दर्भिक सामग्री लेख्न, र ध्यान आकर्षित गर्न बाध्य पार्ने राम्रो प्लेटफर्म खोज्नु पर्दछ। यसको लागि कुनै 'विशेषज्ञ' चाहिन्छ।
जब सम्म तपाईं खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसनमा १००% समर्पित हुनुहुन्छ तपाईले एसईओ भाँडा लिनु पर्छ। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन सिद्धान्त सरल छ तर वास्तवमा वेबसाइटको र्या .्क गर्न धेरै काम र ज्ञान लिन्छ।
राम्रो पोष्ट! मैले तपाईलाई लामो ब्लग पढेको छु भनेर जान्नको लागि कि तपाई राम्रो फिर्ता एन-मजा लिनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ जान्छः
मलाई लाग्छ तपाईं "ज्ञानको श्राप" बाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। ज्ञानको श्राप प्राविधिक व्यक्तिहरूको लागि धेरै सामान्य छ (म पनि पीडित छु), र जब तिनीहरू बिर्सिए कि यो के थियो शुरूमा जस्तो थियो जब तिनीहरूलाई केहि पनि थाहा थिएन।
सानो व्यापार वेब साइटको साथ व्यक्तिले धेरै चीजहरू थाहा पाउनु पर्छ यदि तिनीहरूले खोजी ईन्जिनमा राम्रो गर्न आशा गर्दछन्।
तपाईंले एसईओको बारेमा सबै कुरा जान्नु भयो जुन तपाईंले यो साइट बनाउनु भएको थियो, तर त्यो केही समय अघि भएको थियो र अब तपाईंले मार्गका सबै चीजहरू याद गर्न गाह्रो छ।
यहाँ केहि चीजको एउटा संक्षिप्त उदाहरण हो जुन तपाईंले आफ्नो साइटको साथ "काममा" सिक्नु भएको छ।
जब तपाईं आफ्नो साइट सार्नुभयो
यो चालले तपाईंलाई निम्न आवश्यक बनायो:
गुगल एनालिटिक्स र वेबमास्टर उपकरणहरू स्थापना गर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् (निश्चित गर्न लिंकहरू बढ्दैछन्, साथै ट्राफिकमा पनि),
301०१ पुनर्निर्देशनहरू प्रयोग गर्नुहोस् (तपाईं .htaccess फाईलमा)
एक robots.txt फाइल बनाउनुहोस् (तपाईको ट्रिभियल गैर हो र पूर्वनिर्धारित होईन)
नक्कली सामग्री र प्रमाणिक नामकरण मुद्दाहरू बेवास्ता गर्नुहोस्
... र अन्य धेरै चीजहरू छन्।
तपाइँको साइट चाल एक गैर-विशेषज्ञ को लागी एक साधारण कार्य होईन, र याद गर्नुहोस्, कि उपयोगी मार्ग को एक उदाहरण मात्र हो जुन तपाइँले बाटोमा उठ्नुभयो!
तपाइँ "मार्केटिंग टेक्नोलोजी" जस्ता सर्तहरूको लागि धेरै राम्रा दर्जा दिनुहुन्छ किनकि तपाइँ धेरै राम्ररी लेख्नुहुन्छ, र किनभने तपाइँ एसईओ को बारेमा धेरै जान्नुहुन्छ।
त्यसो भए, जबसम्म हामी SEO को यी प्राविधिक पक्षहरूलाई "सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू" मा समावेश गर्दछौं म पूर्ण रूपमा सहमत छु।
पर्दा! वास्तवमा तपाई मलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ, प्याट!
यो सत्य हो कि म निश्चित रूपमा एसईओ को लागी मेरो साइट चिल्ला र चिम्न गर्छु। यद्यपि माथिको मेरो पोइन्टले मलाई वास्तवमै लक्षित गरिरहेको छैन, यो नेटमा औसत कम्पनीलाई लक्षित गर्दैछ। म ट्वीक र ट्वीक गर्दछ र धेरै जसो म गायकको छु।
सबै ईमानदारी मा, म लामो दौड मा राम्रो भन्दा अधिक क्षति गरेको हुन सक्छ।
सत्य भन्नु हुन्छ, मैले यो पनि स्वीकार गरेको छु कि मैले मेरो सामग्रीलाई अझ राम्रोसँग लक्षित गरेको थिएँ र हुनसक्छ, धेरै ब्लगहरू बनाएँ - जुन म अझै धेरै ध्यान लिन सक्थें। प्रासंगिक सामग्री, लगातार सामग्री ... हरेक पटक जीत।
राम्रो टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
जनवरी 21, 2009 मा 3: 55 एएम
तपाईंले फेरि टाउकोमा नेलको प्रहार गर्नुभयो। समस्या सानोदेखि मध्यम आकारको व्यवसाय क्षेत्रमा अझ गम्भीर हुन्छ किनकि उनीहरूको वेब र वेबसाइटको ज्ञान कम छ र तिनीहरू परामर्शदातामा निर्भर हुन बाध्य छन् उनीहरूलाई सामग्री लेख्न र इनपुट गर्न पनि। तिनीहरूले शाब्दिक रूपमा वेब परामर्शदाता को दया मा छन् र तिनीहरू SEO र साना व्यवसायहरु धक्का यो। साथै यी सल्लाहकारहरूले उनीहरूको लागि साइटहरू निर्माण गर्ने डिजाइनरहरू बाहेक अरू केहि पनि होइनन् जुन केवल साइटको कलात्मक साइटमा कस्तो रुचि राख्दछन् किनकि त्यो उनीहरूले सोच्दछन् र उनीहरूले के बुझेछन्।
माइकल रे हपकिन
जनवरी १, २०१ 21 १२::2009 अपराह्न
डग, तपाईंको बयान "सान्दर्भिक, सम्मोहक सामग्री लेख्नुहोस् र तपाइँ खोजीमा लडाई जित्न सक्नुहुन्छ" पैसामा सही छ। मैले सिकेको पाठ: एक विषय छनौट गर्नुहोस् जसको बारे तपाई भावुक हुनुहुन्छ, प्राय: लेख्नुहोस् र अरुसँग लिंक गर्नुहोस्। एक बर्ष भन्दा बढि पछि यसले काम गर्न सुरू गर्यो। ओ हो, र ट्युन इन क्यालकुलेटर ठूलो सहयोग भएको छ। -मिशेल
जनवरी 27, 2009 मा 8: 26 एएम
तपाईं सहि हुनुहुन्छ कि हेटिंगमा पहिचान गरिएको वेबसाइटको सफलतालाई सामग्री र ब्याकलिंक्समा श्रेय दिन सकिन्छ। यद्यपि तपाइँ SEO विशेषज्ञहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सक्नुहुन्न। धेरै चीज जुन उनीहरूलाई एसईओ विशेषज्ञहरू भनिन्छ मापन गर्दा कि उनीहरूलाई थाहा छ कि तपाइँको वेबसाइटलाई के गर्नुपर्दछ गुगलको शीर्ष पृष्ठ र ranking्कि inमा यसलाई ल्याउनका लागि।